China Backpack T-B3599 fanamboarana sy orinasa | TIGERNU
TIGERNU fivarotana mafana miendrika kitapom-batsy miady amin'ny kitapo kitapo
Fitaovana: ity kitapom-batsy ity dia vita amin'ny nylon marefo, mateza, sariaka tontolo iainana, maharitra sy lamaody. Ny zipera dia namboarina tamina kalitao avo lenta, porofo mipoaka ary tsy misy harafesina. Ny zipper lehibe indrindra dia ny pataloha TIGERNU paty roa sosona efatra nify zipper azo hidiana
Fahafahana: ny haben'ny kitapo dia 30 * 16 * 44cm (L * W * H), ny efitrano lehibe misy fantsom-pifandraisana laptop ho an'ny 15.6 sentimetatra ary toerana malalaka ho an'ireo boky, akanjo, headphone anao. Ny paosy fanoherana ny fangalarana any aoriana dia mety amin'ny zavatra sarinao. Ny paosin-karatra sy ny takelaka fitaratra dia mety kokoa amin'ny dia ataonao, ny paosy zipper roa dia safidy tsara ho an'ny tavoahanginao sy lakile rano.
Endri-javatra: izy io dia famolavolana kitapo miady amin'ny halatra, ny zipera dia eo ambanin'ny tadin-tsoroka, aza avela hanana làlana ho an'ireo mpangalatra. Ny lavaka USB sy sofina ivelany miaraka amina endrika tariby USB azo esorina dia ataovy mora foana ny kitapom-batsy USB handefasana finday na aiza na aiza nefa tsy mivoaka. ny banky herinao ary mankafiza ny mozika amin'ny fotoana rehetra. Ny fehin-tsoroka vita amin'ny rindrina dia azo ovaina ary mahatsapa malefaka kokoa eo amin'ny soroka na dia feno tanteraka aza. Ny fehin-kibo vita amina fehin-kibo dia namboarina ho an'ny kitapo laptop amin'ny trolley ny valizinao, hahatonga ny dianao sy ny fitsangatsangananao ho mora kokoa.
Loko azo: Black, Dark Cyan, kafe, divay, volondavenona, volondavenona
Kitapom-batsy laptop an'ny TIGERNU miady amin'ny halatra, tonga lafatra amin'ny fiainanao, orinasa, asa, sekoly, fitsangatsanganana, fitsangatsanganana, fitsangantsanganana sns.
Laharana maodely T-B3599
Loko: Mainty, divay, kafe, volondavenona volondavenona, volondavenona mainty, cyan mainty
Fonosana: 10pcs / CTN
Habe: H44cm * L30cm * W16cm
Mifanaraka amin'ny haben'ny Laptop: Mety amin'ny 15,6 santimetatra
Fitaovana: Splashproof & fanoherana mahatohitra 70 * 200D Nylon
Endri-javatra: Splashproof; Miaraka amin'ny famandrihana USB
Teo aloha: Backpack T-B3585
Manaraka: Backpack T-B3611
Kitapo kitapo Mini